4 Zvino Jehovha akataura naMosesi, achiti: 2 “Taura nevanakomana vaIsraeri, uchiti, ‘Kana mweya+ ukatadza nokusaziva+ pazvinhu chero zvipi zvazvo zvinorayirwa naJehovha kuti hazvifaniri kuitwa, munhu wacho akaita chimwe chazvo: 3 “‘Kana mupristi, iye muzodziwa,+ akatadza+ zvokuti anoita kuti vanhu vave nemhosva, anofanira kubva auya kuna Jehovha nenzombe duku yakanaka kuti ive chinopiwa chechivi nokuda kwechivi chake+ chaakaita. 4 Anofanira kuuya nenzombe yacho duku kusuo retende rokusanganira+ pamberi paJehovha, oisa ruoko rwake pamusoro wenzombe yacho,+ ourayira nzombe yacho pamberi paJehovha. 5 Mupristi, iye muzodziwa,+ anofanira kutora rimwe ropa renzombe yacho, opinda naro mutende rokusanganira; 6 uye mupristi anofanira kunyika munwe+ wake muropa racho, osasa rimwe ropa racho kanomwe+ pamberi paJehovha, pamberi peketeni renzvimbo tsvene. 7 Mupristi anofanira kuisa rimwe ropa racho panyanga+ dzeatari yerusenzi inonhuhwirira pamberi paJehovha, iri mutende rokusanganira, uye rimwe ropa rose renzombe ngaaridururire muzasi+ meatari yechinopiwa chinopiswa, iri pasuo retende rokusanganira. 8 “‘Asi ngaabvise mafuta ose enzombe yechinopiwa chechivi pairi, mafuta anofukidza ura, iwo mafuta ose ari paura hwacho,+ 9 neitsvo mbiri nemafuta ari padziri, aya ari muhudyu. Asi manda iri pachiropa, ngaaibvise pamwe chete neitsvo dzacho.+ 10 Zvichava zvakafanana nezvinobviswa panzombe yechibayiro chokugoverana.+ Mupristi anofanira kuita kuti zvipfungaire pamusoro peatari yechinopiwa chinopiswa.+ 11 “‘Asi dehwe renzombe yacho nenyama yayo yose pamwe chete nomusoro wayo nemazondo ayo noura hwayo nendove yayo,+ 12 anofanira kuita kuti nzombe yacho yose ibudiswe kunze kwomusasa+ kunzvimbo yakachena kunodururirwa madota ane mafuta,+ uye anofanira kuipisira pahuni dziri pamoto.+ Ngaipisirwe kunodururirwa madota ane mafuta. 13 “‘Zvino kana ungano yose yaIsraeri ikakanganisa,+ uye ungano yacho isina kuziva kuti vakaita chimwe chezvinhu zvose zvinorayirwa naJehovha kuti zvirege kuitwa, vakava nemhosva,+ 14 chivi chavakaitira chimwe chezvinhu izvi chikazivikanwa,+ ungano inofanira kubva yauya nenzombe duku kuti ive chinopiwa chechivi uye inofanira kuuya nayo pamberi petende rokusanganira. 15 Varume vakuru veungano vanofanira kuisa maoko avo pamusoro wenzombe+ yacho pamberi paJehovha, uye nzombe yacho inofanira kuurayirwa pamberi paJehovha. 16 “‘Zvino mupristi, iye muzodziwa,+ anofanira kuuya nerimwe ropa renzombe yacho mutende rokusanganira.+ 17 Mupristi anofanira kunyika munwe wake murimwe ropa racho, orisasa kanomwe pamberi paJehovha, pamberi peketeni.+ 18 Ngaaise rimwe ropa racho panyanga dzeatari+ iri pamberi paJehovha, iri mutende rokusanganira; uye ngaadurure rimwe ropa rose muzasi meatari yechinopiwa chinopiswa,+ iri pasuo retende rokusanganira. 19 Ngaabvise mafuta ayo ose ari pairi, aite kuti apfungaire paatari.+ 20 Anofanira kuitira nzombe yacho sezvaakaitira imwe nzombe yechinopiwa chechivi. Ndizvo zvaachaiitira; uye mupristi anofanira kuvayananisira,+ vakanganwirwe. 21 Anofanira kubudisa nzombe yacho kunze kwomusasa uye anofanira kuipisa, sokupisa kwaakaita nzombe yokutanga.+ Icho chinhu chinopiwa chechivi nokuda kweungano.+ 22 “‘Kana jinda+ rikatadza, rikaita chimwe chezvinhu zvose zvinorayirwa naJehovha Mwari waro kuti hazvifaniri kuitwa,+ asi risingaiti nemaune, rikava nemhosva, 23 kana kuti rikaziviswa nezvechivi charo charakatadzira murayiro,+ rinofanira kuuya nembudzana hono+ yakanaka kuti ive chinopiwa charo. 24 Rinofanira kuisa ruoko rwaro pamusoro+ wembudzi yacho duku, roiurayira munzvimbo inowanzourayirwa chinopiwa chinopiswa pamberi paJehovha.+ Icho chinhu chinopiwa chechivi.+ 25 Mupristi anofanira kutora rimwe ropa rechinopiwa chechivi nomunwe wake, oriisa panyanga+ dzeatari yechinopiwa chinopiswa, odururira rimwe ropa racho rose muzasi meatari yechinopiwa chinopiswa. 26 Ngaaite kuti mafuta acho ose apfungaire paatari sezvaanoita nemafuta echibayiro chokugoverana;+ uye mupristi anofanira kuriyananisira chivi charo,+ rikanganwirwe. 27 “‘Zvino kana mweya upi zvawo wevanhu vomunyika ino ukatadza, munhu wacho asingaiti nemaune nokuita kwake chimwe chezvinhu zvinorayirwa naJehovha kuti hazvifaniri kuitwa, ova nemhosva,+ 28 kana kuti akaziviswa nezvechivi chake chaakaita, anofanira kuuya nembudzana hadzi+ yakanaka nokuda kwechivi chake chaakaita. 29 Anofanira kuisa ruoko rwake pamusoro+ wechinopiwa chechivi, aurayire chinopiwa chechivi munzvimbo imwe chete iyoyo inourayirwa chinopiwa chinopiswa.+ 30 Mupristi anofanira kutora rimwe ropa rayo nomunwe wake, ariise panyanga+ dzeatari yechinopiwa chinopiswa, uye adururire rimwe ropa racho rose muzasi meatari.+ 31 Ngaabvise mafuta ayo ose,+ sokubviswa kunoitwa mafuta echibayiro chokugoverana;+ uye mupristi anofanira kuita kuti apfungaire paatari kuti ave kunhuhwirira kwakanaka kunoitirwa Jehovha;+ uye mupristi anofanira kumuyananisira, akanganwirwe.+ 32 “‘Asi kana akauya negwayana+ kuti rive chinopiwa chake chechinopiwa chechivi, ngaauye negwayana gadzi rakanaka.+ 33 Anofanira kuisa ruoko rwake pamusoro wechinopiwa chechivi, oriurayira munzvimbo inowanzourayirwa chinopiwa chinopiswa kuti rive chinopiwa chechivi.+ 34 Mupristi anofanira kutora rimwe ropa rechinopiwa chechivi nomunwe wake ariise panyanga dzeatari yechinopiwa chinopiswa,+ uye ngaadururire rimwe ropa racho rose muzasi meatari. 35 Ngaabvise mafuta aro ose sokubviswa kunowanzoitwa mafuta egondohwe duku rechibayiro chokugoverana, uye mupristi anofanira kuita kuti zvipfungaire paatari pamusoro pezvinopiwa zvaJehovha zvinopiswa nomoto;+ mupristi anofanira kumuyananisira+ chivi chake chaakaita, akanganwirwe.+